Amai Grace Mugabe Voenda neNyika?
VaRobert Mugabe nemudzimai wavo Amai Grace Mugabe.
Veruzhinji pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti hapana chingatadzisa mudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe, kutora chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri wenyika mwedzi unouya kana kutozoita mutungamiri wenyika kana murume wavo, VaRobert Mugabe, vasiya chigaro.
Asi vamwe vanoti izvi zvinobudirira chete kana VaMugabe vachiri panyanga.
Mumwe mugari wemuHarare uye vachishanda nesangano reCentre for Community Development in Zimbabwe, VaGeorge Makoni, vanoti zvatove pachena kuti Amai Mugabe ndivo vachatora chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika pakongiresi yebato reZanu PF yakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya.
Kunyange hazvo gurukota redzidzo yepamusoro, Muzvinafundo Jonathan Moyo, vakati gurukota rinowona nezvekudzivirirwa kwenyika, VaSydney Sekeramai, vanogona kutora matomhu kubva kuna VaMugabe kana vachinge vasiya basa, vaimbova mutungamiri wesangano revadzidzi munyika reZinasu, VaPride Mkono, vanoti nemamiriro akaita zvinhu muZanu PF, VaSekeramayi vanogona kuswera vakamirira guyo sembwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, Muzvare Memory Kadhau, vanotiwo Amai Mugabe munhu ane masimba akawanda mubato ravo zvekuti chese chavada, hapana chinoramba.
Vatiwo kusimukira kuri kuita Amai Mugabe chinhu chiri kukonzerwa nekusimudzirwa kwavari kuitwa nevanhu vari muchikwata cheZanu PF chiri kuzvidaidza kuti Generation 40.
Muzvare Kadhau vanoti Amai Mugabe munhu anotove neshuviro yekutungamira nyika kwete kugumira pakuve mutevedzeri wemurume wavo chete.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, zvakare vari mutungamiri weMedia Centre, VaEarnest Mudzengi, vanoti zvinogona kunetsa kuti Amai Mugabe vazoita mutungamiri wenyika sezvo zvisati zvozivikanwa kuti VaMngangagwa vachatora matanho api.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo, uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti zvinodiwa naVaMugabe muZanu PF ndizvo zvichaitika.
VaMavhinga vanoti kunyange hazvo vamwe vaitsigira VaMnangagwa vachiri muZanu PF, hapana mukana wekuti munhu aitsigira VaMnangagwa akafanana naAmai Oppah Muchinguri Kashiri atsive VaMnangwagwa pakongiresi yeZanu PF.
VaMudzengi vanoti vanhu vakawanda vachange vachipikisa kuti Amai Mugabe vaite mutungamiri weZanu PF pamwe nenyika vachange vachidzingwa muZanu PF kana kongiresi yemwedzi unouya yapfuura.
Kudzamara kongiresi yechimbichimbi yeZanu PF yaitwa, vakawanda vanoti ndipo pachave nemunongedzo wekuti achatora matomhu kubva kuna VaMugabe ndiyani.